पशुपतिको मुल ढुकुटीको ढोका किन खोलिदैन ? « Janata Times
पशुपतिको मुल ढुकुटीको ढोका किन खोलिदैन ?
‘पशुपतिको मूल ढुकुटी खोल्नुपर्‍यो। यसलाई बन्द गरी राख्नुभएन’, सांसद खिमलाल भट्टराईले भने, ‘यसभित्र के छ ? भएको सम्पत्ति सबै खरानी भयो कि बाँकी छ ? हेरौं त ।’ राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा बिहीबार उनले राजनीतिक सहमति गरेर वा कानुनै बनाउनुपर्ने भए बनाएर पनि मूल ढुकुटी खोल्नुपर्ने बताए। उनी राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक हुन्। उनले बन्द अवस्थामा रहेको मूल ढुकुटी खोल्ने वातावरण बनाउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई आग्रह गरे।
राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मूल ढुकुटी नखोलिनुको कारण मागे। ‘ढुकुटी नखोल्ने कारण के हो ?’, उनले भने, ‘धार्मिक मान्यता केही छ कि ? सर्वोच्च अदालतको आदेशक के हो ?’ यसअघि ढुकुटी खोल्न खोज्दा सर्वोच्चले रोक लगाएको थियो। उनले पशुपतिको सम्पत्ति पारदर्शी हुनुपर्ने बताए। अन्य सांसदले पनि पशुपतिनाथ मन्दिरको ढुकुटीमा भएको सम्पत्तिमा चासो राखे। उनीहरूले ढुकुटी खोलेर त्यसको अवस्थाबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए। सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले ढुकुटीको अवस्था के छ भनी प्रश्न गरेका थिए।
सांसदले श्लेषमान्तक वन डेटिङ गर्ने थलो र दुव्यर्सनीको अखडा बनेकोमा पनि जिज्ञासा राखेका थिए। सदस्यसचिव ढकालले भने श्लेषमान्तक वनमा दिनहुँ दुईपटक गस्ती टोली पठाउने गरिएको जवाफ दिए। समिति सभापति दिलकुमारी रावलले नांगा बाबाको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइन्। सदस्यसचिव ढकालले परापूर्वदेखि पशुपतिमा नांगा बाबा आउने गरेको उल्लेख गरे। यसलाई व्यवस्थापन गर्न सम्भव नरहेको उनको भनाइ थियो। ‘कसैले यसलाई अश्लीलताका रूपमा लिन्छन् त कसैले आध्यात्मिक रूपमा’, उनले भने, ‘यो सदियौंदेखिको चलन हो। हामी यसलाई रोक्न सक्दैनौं।’
जनार्दन शर्माले नै सुनाए माओवादीका अधिकांश नेताले चुनाव नजित्ने खुलासा, राखे यस्तो प्रस्ताव
काठमाडौं, असोज १२ । माओवादी नेता जनार्दन शर्माले आगामी निर्वाचनमा माओवादीका अधिकांश नेताले चुनाव जित्न